Global Voices teny Malagasy » Mampibaribary Ny Fanavakavahana Ara-pananahana Mipetraka Ao Libanona Ny Adin’ny Reny Iray Ho An’ny Zanany Lahy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Novambra 2016 18:53 GMT 1	 · Mpanoratra Zeina Nasser Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Libanona, Fivavahana, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta
Mpikatroka mafana fo manao diabe mitaky ny fahafahan'i Fatima tamin'ny 7 Novambra, 2016. Sary nalain'i Whard Sleiman ary naverina nozaraina miaraka amin'ny fanomezandàlana.
Taorian'ny herinandro nihibohany am-ponja, mbola lavin'i Fatima Ali Hamzeh foana ny hametrahana ny zanany lahy amin'ny rainy izay efa nanambady vehivavy hafa amin'izao fotoana izao, nefa sady mandà ny hisara-panambadiana amin'i Fatima. Izy no voalohany niantso ny polisy, izay nisambotra haingana an'i Fatima, mpampianatra, raha ”nandika ny lalàna” izy tamin'ny fitenenana fa tsy hamotsotra ny fahafahany mitazona ny zanak'izy ireo.
Tamin'ny 5 Novambra 2016, nanao diabe tamin'ny lalan'i Beirut ireo vehivavy sy lehilahy niaraka nitaky ny hamotsorana an'i Fatima.
Rahal, izay mampianatra ao amin'ilay sekoly ampianaran'i Fatima, niteny tamin'ny Global Voices fa teny amin'ny lalàna hody avy any am-pianarana izy raha nahita ny vadiny niandry niaraka tamin'ny polisy tao an-tranony:
Rehefa nody tamin'ilay fiaran'ny sekoly izy, tamin'iny andro iny, efa niandry azy niaraka tamin'ny polisy ny vadiny, hisambotra azy.
Roa andro taorian'ny fihetsiketsehana, afaka tao am-ponja tamin'ny fandoavana onitra i Fatima, miandry ny tontolo fitsarana azy. Ny fikambanana ”Miaro Ny Vehivavy Libaney” (PLW) dia naka lahatsary  ny famotsorana azy, nampiakatra ny lahatsary tao amin'ny Facebook, toerana izay efa nijerena azy mihoatra ny in-37.000. Ao amin'ny lahatsary, milaza amin'ny vahoaka i Fatima, ”Ankehitriny aho dia nanomboka revolisiona manohitra ny famoretana ny vehivavy. Tolon'ny vehivavy rehetra ny ahy.”
Fatima sy i Ali zanany lahy. Sary avy amin'ny ”Miaro ny Vehivavy Libaney” ao amin'ny Facebook  .
Ny tolon'i Fatima dia ny fanentanana mba hanovàna ny lalàna momba ny sata manokana ao Libanona. Toy ny nohazavain'ny  Human Rights Watch tamin'ny 2015:
Manana lalàna 15 mifototra amin'ny finoana mamaritra ny sata manokana manavaka ny vehivavy manerana ny karazam-pivavahana i Libanona ary tsy miantoka ny zo fototra ananany […] Manana lalàna 15 samihafa momba ny sata manokana i Libanona ho an'ireo karazam-pinoana ekena ao aminy fa tsy lalàna sivily mamaritra ny olana toy ny fisaraham-panambadiana, ny zo hanan-javatra, na ny fikarakarana ny ankizy. Ireo lalàna ireo dia tantanin'ny fitsarana ara-pivavahana mahaleotena miaraka amin'ny fanaraha-maso kely na tsy misy mihitsy avy amin'ny fanjakana, ary matetika mamoaka didy izay manitsakitsaka ny zon'ny vehivavy.
Ny raharaha mahazo an'i Fatima no ohatra farany indrindra amin'ny fiantraikan'ny lalàna toy izany eo amin'ny olon-tsotra. Efatra taona i Ali zanany lahy. ”Heverina” ho tokony namotsotra ny zony hitazona azy izy fony feno roa taona, fa nandà izy ary mbola mandà foana ny hamela azy handeha, mandra-paha-olon-dehibe azy.
Balsam Haidar, one of Fatima's school colleagues, told Global Voices that she has been suffering for the past four years:
Balsam Haidar, iray amin'ireo mpiara-miasa amin'i Fatima ao an-tsekoly, dia nilaza tamin'ny Global Voices fa nijaly izy tato anatin'ny efatra taona lasa:
Sady reny izy no ray. Nikarakara ny zanany lahy izy ary nanome azy izay nilainy, raha toa ka tsy nandoa na ariary aza ho azy ny rainy.
Ho valin'izany, nisy hetsika  fanoherana nokarakarain'ny PLW, nanintona mpanao fihetsiketsehana Libaney an'arivony nitakiana fanovàna.
Iray amin'ireo mpikarakara, Nadyn Jouny, nilaza tamin'ny Global Voices fa nitondra olona maro noho izay noeritreretina ilay hetsika fanoherana:
Taoriana efatra taona nijaliana sy tsy nahafahana nahita ny zanako lahy, izao no taona voalohany ahafahako mihiaka sy manandratra ny feoko. Nanana hery maro aho mba hamoahana ny fanaintainana rehetra tao anatiko niaraka tamina hiakiaka. Nandritra ny iray segondra, natrakako ny lohako mba hijery ny fifandraisan'ny olona tamiko, ary gaga aho tamin'ny isan'ny vehivavy nihiaka mafy tamim-panaintainana teo imasoko.
Namerina ny iray tamin'ireo hiaka heno tao amin'ilay hetsi-panoherana izy, ”Tsy ho sasatra izahay!” nampiany hoe:
Ireo ranomaso nalatsakay dia hivadika ho fanantenana, eo imason'ny reniko, iray tampo, ireo rehetra miady ho amin'ity tolona ity, ary indrindra ny zanako lahy, Karam
Reine Nemer, mpikatroka iray hafa ho an'ny vehivavy izay nisolo vava ho an'ny zon'ny vehivavy nandritra ny taona maro, dia nanazava ny antony mampiavaka ity hetsi-panoherana ity:
Mihevitra aho fa ity hetsi-panoherana ity dia iray tamin'ireo hetsi-panoherana lehibe indrindra rehefa tonga tamin'ny zon'ny vehivavy ao Libanona ny resaka, hatramin'ny nikarakaran'ny vehivavy avy amin'ny sekta Shiite azy, ary hatramin'ny nitarihan'ireo vehivavy voahilika tamin'ny sehatra fikatrohana tao Libanona.
Nanampy ilay tanora mpikatroka:
Sambany mba nahita vehivavy sy lehilahy miresaka mikasika ny fanjakan-dehilahy tamina fomba mbola tsy nataony hatramin'izay. Naheno vehivavy sy lehilahy miaro ny zon'ny vehivavy isika, ary miresaka mikasika ny fomba nanakanan'ny fivavahana ny vehivavy tsy hahazo ny zony.
Loharano akaiky amin'ny tranga no nilaza tamin'ny Global Voices, tamin'ny Alarobia 16 Novambra, fa tokony hisy fifanarahana farany eo amin'ny andaniny rehetra:
Rahampitso, Alakamisy faha-17 Novambra, hiatrika ny vadiny ao amin'ny fitsarana i Fatima, ary torohevitry ny mpitsara ny hirosoana amin'ny ”fampihavanana”.
Nolazaina tamin'ny Global Voices fa voalaza ho vonona hamoy ny zony ara-bola i Fatima taorian'ny nisarahany tamin'ny vadiny, mba hitazonana ny zanany. Izany, hoy ny loharano, dia mitovy amin'ny fandrahonana, satria manafaka ny vadiny amin'ny andraikiny ara-bola mankany aminy sy any amin'ny zanany.
Loharano hafa, izay nisafidy ny hijanona tsy tononina anarana, dia niteny tamin'ny Global Voices fa nangataka fanampiana ara-bola kely ho an-janany i Fatima, nanomboka tamin'ny niantohany ny fandaniana rehetra nandritra ireo taona maro lasa rehetra. Nanampy ilay loharano hoe:
Fa maninona ny rainy no tsy mba mikarakara ny zanany?… Ampy ve ny hitomaniany anatinà fandaharana iray ao amin'ny fahitalavitra fotsiny sy ny hitenenany fa malahelo azy izy?
Tsy namoaka fanapahankevitra mifandray amin'ny fandanian'izy mivady nanomboka tamin'ny 2015 ny fitsaràna. Nandritra ny taona maro, ankoatr'izay, tsy niraharaha ireo fangatahana isankarazany nataon'i Fatima ny fitsarana.
Namela azy ho very fanahy izany, tsy fantatra na hisara-panambadiana izy na tsia. Araka izay efa fanirian'ny vadiny ho azy rahateo
Tamin'ny fotoana nanoratana ity, efa voalahatra ny fotoana hisehoan'i Fatima eo anoloan'ny fitsaràna. Araka ny filazan'ny rahavaviny:
Nandritra ny fotoana fohy izay noheverina hanaovana fampihavanana androany, tsy nisy nanatrika na i Fatima na ny vadiny. Ny mpisolovava azy ireo ihany no tao amin'ny fitsarana. Nafindra ho amin'ny Alakamisy manaraka indray ny fotoana manaraka, ary andrasana hanatrika izany ka hitady vahaolana farany i Fatima sy ny vadiny. Androany, anefa, nanolotra vahaolana ho an'ny ady ny mpisolovavan'ilay lehilahy vadiny momba ny ampahany mifandray amin'ny zaza ihany, raha ny mpisolovavan'i Fatima ( ny rahavaviny Fadia Hamza) dia nangataka ny hamahàna tanteraka ny fifandirana, tafiditra amin'izany ny ampahany mifandray amin'ny andraikitry ny ray amin'ny fanomezana vola ho an'ny fandanian'ny reny sy ny zaza. Nangataka ny mpisolovavan'ilay lehilahy vadiny mba hijanona telo andro any amin-drainy ny zaza ary efatra andro any amin'ny reniny, raha nanome sosokevitra kosa ny mpitsara hoe mijanona dimy andro miaraka amin'ny reniny ny zaza ary roa andro miaraka amin'ny rainy. Na izany aza, hitan'ny reniny fa mety ho very ilay zaza raha tanterahana izany vahaolana izany, indrindra fa tsy maintsy mandeha mianatra izy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/11/23/92240/
 ”Miaro Ny Vehivavy Libaney” : https://www.facebook.com/PLW.Lebanon/?fref=ts
 naka lahatsary: https://www.facebook.com/PLW.Lebanon/videos/1341766972514050/